Accueil Fijoroana Vavolombelona
Sitrana tamin'ny infection interne tao amin'ny kibo
Ho Voninahitr'Andriamanitra Ray-Zanaka-Fanahy Masina irery ihany no hijoroako vavolombelona aminareo, fa nanamarina ny Teniny Izy amin'ny handatsahany ny Fanahiny amin'ny nofo rehetra amin'ny andro farany. Nentiny nanasitranana ahy izany. Tamin'ny voalohany dia tao amin'ny ambavafoko no navaivay, ary tena nandreraka ahy izany. Nilaza ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay mba hangataka ny fahafenoan'ny Fanahy Masina ny tsirairay; nitsangana tamin'ny Anaran'i Jesosy aho ary nino aho fa amin'ny fahafenoan'ny Fanahin'Andriamanitra ato anatiko dia hiala ny aretina. Deraina ny Tompo fa afaka ny aretina ary natanjaka aho na dia mbola teo am-pivavahana aza. Tonga dia nande mafimafy aho nijoro vavolombelona rehefa niantso ny mpanompon'Andriamanitra taorian'ny vavaka.
Tamin'ny faharoa indray, nisy fanaintainana tao @ ila-kiboko havia (infection interne). Nahatratra 39° ny hafanako, nivarahontsana ny dokotera. Izaho amin'io mampinono.
Dimanche, 18 Août 2013 13:27 | |
Salama daholo tompoko !
Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hahazahoako mijoro vavolombelona eto aminareo!
Izaho dia zazalahy nianatra Sekoly Alahady tao amin'ny Jesosy Mamonjy taloha. Rehefa niha-lehibe nefa dia navilin'ny Satana ka dia nanaraka azy tany ka nanjankany, ary dia nofatorany tamina fahazaran-dratsy isan-karazany : tao ny famaliana Ray aman-dReny. Ny raiko moa niverin-dalana ary dia nanampy an'ny Satana tokoa izany!
Dia nilomano tao anaty faharatsiana aho ; notsinotsiniaviko ny reniko. Ny raiko moa nandao azy ka izy irery no nitaiza anay. Noho ny famatoran'ny devoly dia nanao izay tena nampalahelo azy aho, nitenenako ratsy teny amason'olona izy, ary ny zandry keliko dia nampahoriko tamin'ny daroka isan-karazany. Tao anatin’izany dia olona isan'izay tena tia filàna indrindra aho, nandramako avokoa ny faharatsiana rehetra ary efa nisy ny fotoana – manao azafady indrindra amin’ny ilazako azy - niarahako tamin'ny sakaizan'ny namako… Tena olona feno ditra aho ary efa lazain'olona fa tsy misy fanantenana intsony. Olona tia ady aho ary manana sakaiza ratsy bediabe sy nisakaiza tamin'ny vehivavy janga maro.
Voninahitra ho an’ i Jesosy Kristy irery ihany no hijoroako vavolombelona ny amin’ ny zava-mahagaga nataon’ ny Tompo tamiko.
Monina ao Bezaha fivondronan’ i Betioky Atsimo ny tenako. Tamin’ ny volana Mars 2006 dia narary aho: Nihamahia sy sempotra aho, ary tsy nahasakafo ihany koa satria nisy zavatra manakana tao amin’ ny tendako. Notsaboina tany amin’ ny dokotera fa hoe lany calcium nefa tsy nisy fiovany.
Nentina tany amin’ ny ombiasy aho avy eo ka dia notsaboina tao, omby iray no namidy nikarakarana ahy tany, tsy fitsaboana anefa fa nampidirana devoly atao hoe JINY aho. Lasa mpitaiza olona aho nanomboka teo sady tsy nahazo nivavaka intsony koa, fa hoe maty raha vao mivavaka. Vao maika anefa nampitombo ny aretiko ny fananako io devoly Jiny io:
Lasa nanjavona ny masoko, nefa aho tamin’io fotoana io nanana anaka, ary tena natahotra ny tsy ahazo zaza.
Indray andro Zoma tamin’ ny volana Oktobra 2008, nisy mpanompon’ Andriamanitra namangy anay sady nitoriteny no nanoro hevitra tonga tao amin’ ny tokatranonay. Nangetaheta ny hivavaka aho, ary dia tonga tany am-piangonana. Rehefa nandre toriteny aho, dia nihetsika ilay devoly tato amiko. Nivavaka ho ahy ny fiangonana rehefa nirava ny fivoriana, ary nodorana tao am-piangonana ny odiratsiko rehetra.
Nanomboka teo dia tsapako nihamaivana aho, ary nihanahita koa ny masoko, sady nanomboka nisakafo sy nahita tory tsara, sady tsy sempotsempotra intsony. Tamin'izay koa aho no nahatsapa fa afaka tamin’ ny fahazaran-dratsy rehetra izay namatotra ahy. Namonjy fivoriana sy fotoam-bavaka maraina foana aho hatreo, ary tsapako fa tena voavonjy tanteraka. Halako ny fomba fanaoko taloha.
Voninahitra ho an’ Andriamanitra irery ihany.